विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दिँदै दंगीशरण गाउँपालिका - नयाँपुल अनलाइन डटकम
विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दिँदै दंगीशरण गाउँपालिका
दंगीशरण गाउँपालिका दाङ जिल्लाको एउटा स्थानीय तह हो। साबिकका गोल्टाकुरी, हेकुलीर श्रीगाउँ गाविस मिलेर बनेको यस गाउँपालिकाको स्थापन भएको हो । गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय हेकुलीमा छ। गाउँपालिकाको औसत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको छ भने स्थानीय बासिन्दाको अरू आम्दानीको स्रोतको रुपमा साना उद्योग, व्यापार, सेवामूलक व्यवसाय, नोकरीको साथै वैदेशिक रोजगारी पनि हो।यस गाउँपालिकामा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट भागीराम चौधरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। चौधरी लामो समयसम्म कमैया आन्दोलन तथा मुक्त कमलरी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै सक्रिय रूपमा सहभागी भई समाजिक कार्यमा लागेका थिए। प्रस्तुत छ, अध्यक्ष चौधरीसँग गाउँपालिकाको समग्र विकास निर्माणमा केन्द्रित रही गरिएको कुराकानिको सम्पादित अंश ।
अध्यक्ष ज्यु, निर्वाचित भएर आउनु भएको ३ बर्ष बितिसकेको छ, अहिले गाउँपालिको काम कारबाहि कसरि अघि बढाईरहनु भएको छ ?
हामीले विभिन्न हक अधिकारका लागि जहिले पनि सरकारसँग अधिकार मागिरहन्थ्यौँ, तर अहिले म अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँमा आएको छु। म अधिकार माग्नेबाट अधिकार प्रयोग गर्न दिने ठाउँमा आएको ३ वर्ष भयो। तर आफू आज यहाँ आउँदा निकै खुशी भएको छु। हामी निर्वाचित भएपछि नयाँ संरचना भएको हो। नेपालमै पहिलोपटक नयाँ संरचना भएकाले कसरी जाने भन्ने थाहा थिएन। माथिको नेतृत्वलाई सोध्यो, तपाईं धमिलो पानीमा खोला तर्दै हुनुहुन्छ, भन्ने जवाफ आउने र तपाई कसरी जाने भन्ने कुरा आफैँले तय गर्ने कुरा हो, हामीले अहिले केहीँ गर्न सक्दैनौँ भन्ने जवाफ आउँथ्यो। हुन पनि त्यहि रहेका आफुले ढुंगा छाम्दै जाने राम्रो भए अगाडि बढ्ने नभए नत्र त्यसै बस्ने गरी निर्वाचन भएको एक वर्ष यसरी नै बित्यो। त्यसैगरी अर्को वर्ष कर्मचारी समायोजनले गर्दा धेरै समस्या भोग्नुपर्‍यो। कर्मचारी समायोजनले कर्मचारीहरू अब हामी यहाँबाट जाने हो, पछि आउनेले काम गर्दछु, भन्ने भानले गर्दा काममा समस्या भएको थियो। संमग्रमा भन्नु पर्दा हामीले ३ वर्ष सिक्दै अगाडि बढ्दै बितेको जस्तो मलाई लाग्छ।
निर्वाचनमा जनतासामु गरेका चुनावी नारा कति पूरा भए कति बाँकी छन् ?
हामीले निर्वाचनमा जनतासामु गरेको प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्दै आएका छौँ। हामीले गाउँगाउँमा बाटो पुर्‍याउने भनेको थियौँ। तर पक्की बनाउन सकेको भएता पनि ट्र्याक खोल्ने ग्रावेल गर्ने जस्ता काम गर्दै आएका छौँ। त्यसैगरी जनताको घर आँगनसम्म गाडी पुर्‍याएका छौँ। त्यसैगरी सिँचाईतर्फ पनि हामी आफ्नो चुनावी नारा बनाएको थियौँ। त्यो पनि क्रमिक रूपमा काम हुँदै छ, हाम्रो सानो लगानीमा कुलो निर्माण तथा डिप बोरिङ निर्माण गरेको छौँ। तर हामी आइसकेपछि जुन परम्परागत सिँचाइ कुला थिए, तिनीहरूको निर्माण गरी जनताहरूलाई सेवा पुर्‍याएका छौँ। गाउँपालिकामा शिक्षाक्षेत्रमा नराम्रो थियो, तर हामी आइसकेपछि क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै आएका छौँ। त्यसैगरी हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै नागरिकहरूलाई सहज सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ। तर कतिपय हाम्रो समस्याको कारणले पनि नभएका होलान्। ती पनि हाम्रो कार्यकालभित्र पूरा गरी छाड्ने अठोट लिएर काम गर्दैछौँ।
गाउपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकका क्षेत्रहरुमा के के कामग गरेको छ ?
हामिले १८ करोडको लागतमा १५ शैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको शिलान्यास गरेका छौं । आगामि बर्ष भित्रै उक्त अस्पतालको निर्माण सम्पन्न हुनेछ । खानेपानिको क्षेत्रमा पनि गाउँपालिकाले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ ।
यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा दंगीशरण गाउँपालिकाले विज्ञान विषय लिएर कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दिने भएको छ । दंगीशरण गाउँपालिका अन्तरगतका सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई उत्तिर्ण गरेर विज्ञान विषय लिएर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दिन लागिएको हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरियता बढाउन र दंगीशरण गाउँपालिकाका गरिव तथा जेहन्दार विद्यार्थीलाई विज्ञान विषय अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गर्न छात्रबृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको हो । छात्रबृत्ति लिन चाहने विद्यार्थीले आफूले विज्ञान विषय लिएर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको प्रमाणित हुने कागजात पेश गर्नुपर्ने छ । यसका साथै दंगीशरण गाउँपालिकामा रहेको एनसिसि बैंकमा खाता हुनुपर्ने, एसईई उत्तिर्ण गरेको लब्धाङ्क तथा चारित्रिक प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने छ । गाउँपालिकाले छात्रबृत्तिका लागि दुईलाख ५० हजार रुपैँया विनियोजन गरेको छ । सोही रकमबाट छात्रबृति दिन लागरिुउको हो । एक जना विद्यार्थीलाई मासिक एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार रुपैँया सम्म दिने योजना छ । बढिमा १०–१२ जना विद्यार्थीले विज्ञान विषय लिएर पढ्लान भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।
दंगीशरण त कृषि उत्पादनको सम्भावना भएको ठाउँ हो, कृषिमा के छन योजना ?
कृषिमा हामीले सानातिना केही कामहरु अघि बढाएका छौं । थोपा सिंचाइ, सामग्री वितरणको काम भएका छन । त्यस्तै टनेल र निःशुल्क विउ वितरणको काम पनि भएका छन । कृषिमा अव यान्त्रिकिकरणलाई नै जोड दिनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । कृषिमा पनि यहाँ तरकारी खेतिको सम्भावना यहाँ छ । यहाँ वडा नं। ३ र ६ मा राम्रै तरकारी उत्पादन भइरहेको छ । त्यसको बजारीकरण गर्ने काम कसरी गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण पाटो छ । त्यस्तै उन्नत खालका तालिम दिने कुरा, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको कुरा, पशुपालनतिर गाई पालन र कुखुराको त निजीस्तरबाटै काम भइरहेका छन । यहाँ कुखुरामा त्यति लगानी गर्नुपर्ने देखिदैन । तर वाख्रा र गाइपालनतिर ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने लागेको छ ।
तपाईंको गाउँपालिकामा के कस्ता चुनौती महसुस गर्नुभयो ?
अहिले म निर्वाचित भएर आएको २ वर्ष भयो, तर काम गर्नका लागि स्रोत चाहिने भएकाले त्यसोका चुनौती भयो। त्यसैगरी हामीले हरेक कामलाई असार मसान्तभन्दा अगाडि सक्ने भन्ने गरे तापनि विभिन्न कारण गर्दा त्यो हुन नसकेको समस्या छ। त्यसैगरी गाउँपालिकामा आर्थिक अभावको कारण ठूला आयोजनाको काम गर्न सकेका छैनौँ। हामीलाई ऐन कानुन निर्माणमा समस्या भएको थियो, तर अहिलेसम्म हामीले १७ वटा ऐन र केही कार्यविधिहरू पास गरिसकेका छौँ।
सुशासनको अवस्था भन्नुपर्दा हामी २–३ वटा कुराले अगाडि बढेका छौँ। पहिलो कुरा हामीले योजनाहरूको लागत कति कहाँ भन्ने कुराको आम नागरिकहरूलाई सूचना प्रवाह गर्दै छौँ। त्यसैगरी हाम्रो गाउँपालिकाको वेभ साइडमा राखेका हुन्छौँ। त्यस्तै हामीले योजना निर्माण गर्नको लागि उपभोक्ताहरूलाई जिम्मा दिएर गराउँदै आएका छौँ त्यो काम सम्पन्न भएपछि सार्वजानिक कार्यक्रमको आयोजना गरी त्यसको बारेमा सार्वजनिक गर्दै आएका छौँ।
आफ्नो कार्यकालभरमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउँछु भन्ने कार्ययोजना बनाउनुभएको छ ?
अब हाम्रो कार्यकाल करिब २ वर्ष बाँकि छ, अबका दिनहरुमा केही ठूला सडकहरू जुन पुराना र महत्वपूर्ण हुन तिनी पिच हुनेछन्। त्यसैगरी गाउँपालिकाका २ र ३ नम्बर वडा गोलटाकुरी जोड्न पुलको काम सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यसैगरी, केही पर्यटकीयस्थलहरूको निर्माण गर्ने योजना पनि छ। त्यसैगरी गाउँपालिकाभित्र करिब ५० प्रतिशत जमिन सिँचाइ व्‍यवस्था हुनेछ। त्यसैगरी अहिले गाउँपालिकामा ४० प्रतिशत नागरिकहरूले धाराको पानी खाँदै आएका छन्, भने अबको ३ वर्षभित्र ८० प्रतिशतलाई पहुचमा पुर्‍याउने योजना रहेको छ। त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदतर्फमा पनि धेरै काम गर्नेछौँ।
शिक्षित, सक्षम, समुन्नत काठेखोला गाउँपालिका बनाउन प्रयासरत छौं : अध्यक्ष थापा